Sida caafimaadkaaga looga baaro heerkulbeegyadan gallium | Ragga Stylish
Isaac | | Ku habboon, Caafimaadka
Waxaa laga yaabaa in cudurka faafa ee SARS-CoV-2 uu qof walba ka dhigay qof caafimaadkiisu aad u yar yahay. Ololeyaal hore oo loogu talagalay hargabka caadiga ah ee loo yaqaan 'coronavirus' iyo fayraska ifilada '' waxaa hadda ku soo biiray 'cusub' Covid-19. Farqiga u dhexeeya hargabka caadiga ah iyo ifilada ama Covid-19 wuxuu noqon karaa heerkul. Sidaa darteed, leedahay heerkulbeegga wanaagsan ee gallium guriga wuxuu noqon karaa fikrad aad u fiican hada sidii hore.
Heerkulbeegyadan gallium uma baahna baytariyaal, sidaas bayna noqonayaan had iyo jeer la heli karo marka aad u baahato. Intaas waxaa sii dheer, maadaama aysan dijitaal ahayn, way fududahay in la isticmaalo, xitaa dadka waayeelka ah ee ay ku adag tahay inay fahmaan heerkulbeegyada casriga ah. Iyo tan ugu fiican oo dhan, iyagu ma sii wataan khatarta heerkulbeegyada ku saleysan meerkuriga, maadaama gallium uusan sun ahayn sida Hg.
1 Waa maxay heerkulbeegga gallium?
2 Sidee u isticmaashaa heerkulbeegga gallium?
Waa maxay heerkulbeegga gallium?
Un heerkulbeegga gallium Waa aalad lagu cabbiro heerkulka la mid ah heerkulbeegyadeedii meerkuriga ee aasaasiga ahaa, kaliya ma isticmaali karto birta kiimikada halista ah ee loo mamnuucay sunteeda darteed. Halkii waxay isticmaalaan gallium, ama halkii, waxay isticmaalaan daawaha dareeraha ah ee loo yaqaan galinstan.
Qaabka hawlgalku waa mid aasaasi ah. Guluubkeeda birta ah, halka uu ku keydiyo galinka, markuu taabto dusha sare, sida jidhka bini'aadamka, wuu ballaadhi doonaa. Taasi waxay ku dhaqaajin doontaa biraha dareeraha ah tuubada leh cabirka heerkulka. Taasi waxay gaarsiin doontaa calaamadda heerkulka ay ogaaneyso, marka waad garan kartaa inaad qandho qabtid iyo in kale.
Taasi waa, si la mid ah kuwa isticmaala meerkurida, kaliya ma aha sida sunta ah. Xaqiiqdii, ka Midowga Yurub mamnuucay dhamaan noocyada aaladaha isticmaala meerkuriga sanadkii 2009. Tan iyo xiligaas waxaa la mamnuucay in la iibiyo noocan heerkulbeegga, iyadoo lagu badalayo kuwa ka samaysan gallium alloy.
Daawaha la yiri, galinstanstanAsal ahaan waa dareere isku qasma gallium, indium iyo tin, taas oo ka dhigaysa inay ku sii jirto xaalad dareere ah heerkulka qolka iyo inaad aad u ixtiraamto deegaanka oo aan sun lahayn haddii ay jabaan oo ay kula soo xiriiraan. Sidoo kale iskumid kuma samayn doonaan waxyaabo dahab ah, sida ku dhacday meerkuriga, sidaa darteed dahabkaagu wuu badbaadi doonaa.
Intaa waxaa dheer, the isku halaynta ama dareenka heerkulbeegyadan lama beddelin beddelidda meerkuriga. Waxay yihiin kuwo sax ah, awood u leh inay ku kala duwan yihiin oo keliya 0.1ºC cabbirada.
Sidee u isticmaashaa heerkulbeegga gallium?
Heerkulbeegga gallium, ama galinin, waxaa loo isticmaalaa sida saxda ah heerkulbeegga meerkuriga. Taasi waa, waa heerkulbeeg taas u baahan xiriir, oo ka duwan indhaha indhaha. Tallaabooyinka habraaca loogu talagalay isticmaalka saxda ah waa:
Kahor intaadan bilaabin cabirka, heerkulbeegga ku hay korkiisa oo rux dhaqdhaqaaq dhakhso leh curcurka iyo taxaddar si aadan waxba u dhicin ama u dhicin. Tani waxay gacan ka geysan doontaa hubinta in heerkulku hoos ugu dhaco 35ºC.
CKu dheji heerkulbeegga aagga la doortay si loo cabbiro heerkulka, doorbid ahaan kilkisha nadaafadda (habab kale, sida cabbirka afka ama malawadka ayaa ku lug yeelan doona jeermis ku filan oo leh saabuun jeermiska lagu dilo iyo biyo).
Sug waqti ilaa 3 daqiiqo ah oo hubi heerkulka calaamadda.
Durante hawsha cabirku waa inuusan lumin xiriirka dusha sare ee jirka halka la dhigo. Intaas waxaa sii dheer, bukaanku waa inuu nasan yahay, isagoon horey u sameyn jimicsi jireed, maadaama ay bedeli karto cabirka. Intaas waxaa sii dheer, haddii loo isticmaalo afka, ficilada sida sigaar cabista, ama cunista cuntada ama cabitaanka ayaa sidoo kale wax ka beddeli kara natiijooyinka.
Haddii ay dhacdo inuu heer-kulku jabo, ha ka welwelin. Maaddaama aysan lahayn meerkuri khatar ma noqon doonto. Kaliya waa inaad soo qaadataa jajabyada oo aad ku nadiifisaa dusha sare leh wasakhda leh gashan warqad wax nuugaysa oo lagu rusheeyey aalkolo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Sida looga baaro caafimaadkaaga heerkulbeegyadan gallium-ka